फिल्ममा जम्न नसकेकी हुन् एलिसा ? « Khabarhub
फिल्ममा जम्न नसकेकी हुन् एलिसा ?
काठमाडौं – नायिका एलिसा राईले एउटा फिल्म खेलिन् । चलचित्र ‘लूट २’ मा उनको अभिनय थियो । फिल्मले भन्दा पनि फिल्ममा समावेश गीत ‘ठमेल बजार’ ले एलिसाको करिअरलाई एकाएक चर्चाको शिखरमा पु–यायो । यो गीतले उनको करिअरलाई धेरै फाइदा पु–यायो ।
खास गरी लघु चलचित्रमा अभिनय गर्ने एलिसा यो फिल्मपछि म्युजिक भिडियोमा एकाएक छाइन् । तर, उनलाई फिल्ममा काम गर्न भने खासै अफर आएन । पछिल्लो समय स्टेज कार्यक्रम र म्युजिक भिडियोमै व्यस्त रहेकी एलिसाले चलचित्रमा भने देख्न चाहेका छन् ।
भलै फिल्ममा भने एलिसा खासै जम्न सकिनन् । तर उनको व्यस्तता घटेको छैन । म्युजिक भिडियोमा पनि उत्तिकै व्यस्त भइरहेकी एलिसा सामाजिक सञ्जालमा पनि सक्रिय रहन्छिन् ।
हालै उनी एक कार्यक्रमका लागि हङकङ पुगेकी छिन् । व्यस्तता आफ्नो ठाउँमा छ, तर फ्यानले भने उनलाई फिल्ममा समेत अभिनय गर्न आग्रह गरिरहेका छन् । कतिले भने उनी फिल्ममा जम्न नसकेको टिप्पणी गरिरहेका छन् । राम्रो भूमिका पायो भने फिल्ममा काम गर्दा राम्रै हुने थियो नि हैन र ?
प्रकाशित मिति : १६ असार २०७६, सोमबार १ : ५७ बजे